rashka | Coinfalls Casino
rashka, waa ciyaar Afyare ah oo uu soo dhigay on theme ah habeen gudcur ah, iyo dhameystirtay la calaamadaha midabo iyo dheeraad ah. With wonderful designs, Afyare qoreysa badan oo abaalgud iyo gunno loogu tala ciyaartoyda inuu ku guuleysto. The rashka ee ciyaarta booska this halkan u joognaa in ciyaartoyda siin qaar ka mid ah guul xiiso leh. characters The xiiso leh buuxiyeen ku duntu ka ciyaarta booska this halkan u joognaa in ciyaartoyda siin guul culus. Tayada kexeeyey naqshadeynta iyo midabkiinaba racfaan hayn doonaa ciyaartoyda marti qaaday oo ku hawlan.
Tani ciyaarta booska qarxa badan ee abaal ciyaartoyda inay ku raaxaystaan. Waxaa jira midabo dhalaalaya iyo kuwaad in ay ka go'an this ciyaarta online Afyare iyo muuqdo gameplay fudud oo lagu raaxaysan karaa by nooc kasta oo ciyaartoyda. Gunta galay Afyare iyo helo oo ka mid ah abaal badan oo uu soo saftay tan ciyaarta booska online.
About sameeysa ee Rashka
Powered by Games Suurogal ah, Rashka waa ciyaar xiiso leh booska in sidoo kale abaal badan ciyaartoyda. They are one of the youngest game developers in the iGaming industry and work to create top games for players to enjoy. Waxay ku dadaalaan in ay noqon madaxda abuurnimo iyo in la abuuro tayada kexeeyey oo kulan casino ciyaartoyda inay ku raaxaystaan. Dive into the different games develop by them and experience a worthwhile gaming experience.
rashka leeyihiin 5 duntu iyo 10 paylines in la ciyaaro, size qadaadiic ah dhaxeysa ee u dhexeeya 0.02-5.00 taas oo macnaheedu yahay ciyaartoyda gelin karaa ilaa 50 credits ee saamiga. Mar kasta oo calaamado u dhigma ciyaartoyda dalka, guul saarnaan doonta. The more symbols you land matching, ku guul dheeraad ah ciyaartoyda si loo helo. The calaamado kala duwan leeyihiin kasta oo qiimo kala duwan, akhri paytable ah si ay u fahmaan qiimaha in kasta qaban. Si ka duwan, naadi kale oo badan, ma jiraan wilds fidiyana ee ciyaarta booska this, guul oo dhan ahaan ciyaarta saldhig laftiisa ah, Halkan ka hubi in aad meel size bet ee caqli iyo lataliyaha ilaa ay matalo aad Guuleystay.
rashka, waa ciyaar aad u qurux badan Afyare in isla soo jiidata ciyaartoyda la midabada kala duwan oo ku baahsan Afyare. Iftiinka ku faafa wakhti kasta oo aad miiqdaan duntu waa waardiye istaahila iyo siinaysaa ciyaaryahan fursad ay ku heli qabsado badan oo guul. Maxay yihiin hadalladan aad weli sugaya? Play this booska maanta oo loo helo oo ka mid ah guul badan.